Maamul Gabaleed ay Kenya Taageerto Ethiopia Colaad ma Galin Karaa? – Rasaasa News
Jul 27, 2011 Maamul Gabaleed ay Kenya Taageerto Ethiopia Colaad ma Galin Karaa!
Maamul gabaleedka Azania ee ay dawlada Kenya baarka u fidhayso waa u jeedo badan iyo ninba meel u aroori, waxaana suurto gal ah in uu abuuro Jawi siyaasadeed oo ka badalan kan maanta ka jira Geeska Afrika.
Ethiopia iyo Keyna waa laba dhoon horaad oo is ceshada labada dhinacna kaga fadhiya gogol ay leeyihiin dadka ku hadla Somaligu [ummada somalida], xuduuda ay labada dal la leeyihiin Somaliya ma ah xuduud caalami loo aqoonsan yahay.
Arintaas daraadeed, waa xaqiiq in labada dal Kenya iyo Ethiopia ayna jeclayn in siyaasada Somaliya caga dhigato, heshiisna waxay ku yihiin in ayna cagaha isku taagin dawlad Somaliyeed oo awood yeelata [xigasho: Faarax Macalin gudoomiye xigeenka baarlamanka Kenya]. Kenya dani uguma jirto in gabalka Ogaden uu ka go,o dalka Ethiopia, si la mid ah Ethiopia raali ka ma ah in gabalka NFD uu ka go,o Kenya.
Burburkii labadii xukuumadood ee Ethiopia iyo Somaliya, Ethiopia waxaa ku abuurmay Jabhado Somali ah oo raba in ay ka jaraan Ethiopia gabalka Ogaden, dawladii Somaliyana waxaa ku dhacay burbur aan kabasho lahayn.
Labada dal ee Kenya iyo Ethiopia, waxay colaad u qabi jireen dawladihii Somaliya ka jiri jiray oo mar walba su,aal la dabo taagnaa ku saabsan dhul iyo dad. Burburkii Somaliya labada dal way ku farxeen dabadana way isa sii raaciyeen, hase ahaatee waxaa soo foodsaartay labada dalba culays amaan daro oo kaga imanay dhinaca Somaliya. In kasta oo ay Ethiopia gashay gudaha dalka burbursan ee Somaliya sanadkii 2006, hadana way ku nagaan wayday, ka dib kolkii uu khasaare badan soo gaadhay.
Ethiopia ilaa xad way ka gaashaamatay xasaradii kaga imanaysay dhanka Somaliya, ka dib kolkii ay samaysay ciidamo Somali ah oo ka hawl gala gabalka Ogaden iyo xuduuda ay la leedahay Somaliya. Waxaa kale oo ay heshay fursad dahabi ah oo ay kaga faa,iidaysatay khilaaf ka dhex dilaacay ururka ONLF, waxayna heshiis la gaadhay laba urur oo ka dagaalami jiray gabalka Ogaden. In kasta oo uu jiro garab diiday in uu nabad la galo Ethiopia.
Waxaa kale oo ay isku dayeysaa xukuumada Ethiopia in ay kasbato wadnayaasha dadweynaha Somalida Ethiopia oo in badan colaadi ka dhaxaysay Ethiopia, arintaas oo u egg mid ay dawladu ku guulaysatay.
Dalka Kenya oo ah dal xaga colaada ka degan Ethiopia, waxaa dhinaca ku haya gabalada Koonfur iyo koonfur galbeed ee Somaliya oo ay ka taliyaan Islaamiyiin Somali ah, oo aan wax wayn u arag Kenya, marar badana galay gudaha Kenya. Xadka, waxaa dhinaca isku haya dadka Somalida ah ee kala haysta dhalashada Kenya iyo Somaliya, colaada ka jirta gabaladaas waxaa fudud in caasimada Kenya si sahal ah qas uga abuuri karaan ururada Islamiyiinta ah ee Somaliya.
Hadaba, si ay u xadido nabad galiyo xumada xuduuda u dhaxaysa labada dal, dawlada Kenya waxay dan mooday in ay abuurto dawlad gabaleed laga sameeyo koonfurta Somaliya oo ay iyadu maamusho.
Maamul gabaleedka Azania, oo ah mid ka gadisan magacyada ay wataan maamulada ka abuurma dalka Somaliya ayaa ah mid leh ujeedo ka durugsan maamul gabaleedyada ka jira Somaliya. Masuulka ugu sareeya ee maamulka cusub ee Azania ayaa ah nin ka tirsan ururka mucaaradka ah ee ka dagaalama gabalka Ogaden, taageerayaasha maamulkaas dhamaantood waa taageerayaasha mucaaradka gabalka Ogaden.
Ethiopia, raali kama ah maamul gabaleedka ay Kenya barbaarinayso, maamulkaas oo hadii uu taabogalo macnaheedu noqonayo weerar lagu qaaday gabalka Ogaden ee Ethiopia. Ethiopia, dhawr goor ayey ka codsatay Kenya in ay joojiso maamul ay ka dhisto Koonfurta Somaliya, hadii ayna joojinayna ay ruux aan ahayn ninka madaxda hada ka ah ka dhigto, hadii kale ay arintaas noqonayso waxyeelo loola badheedhay Ethiopia.
Kenya, waxay u samaynaysaa maamulkan waxay rabtaa in ay ku ilaaliso xuduuda ay la leedahay koonfurta dalka Somaliya.
Waxaa muuqata in Kenya ay dhagaha ka furaysatay codsiga Ethiopia, waxaana ka socda magaalada Nairobi dhamaystirkii ugu dambeeyey ee maamulka Azania, oo loogu samaynay 65 xubnood oo baarlamaan ah. In kasta oo ay soo baxayaan taageero la,aan ay muujinayaan dadweynaha ku nool saddexda gabal ee uu maamulku doonayo in uu maamulo, walow ayna joogi karin Kenya cidii diida maamulka Azania.
Waxaan la saadaalin karin talaabooyinka ay Ethiopia qaadi doonto si ay uga hortagto dhibka kaga iman kara maamulka Azania. Waxaana suurto gal in ay qaado talaabo la mid ah kuwa Kenya ay qaaday, arintaas oo keeni karta in uu xumaado xidhiidhka u dhaxeeya labada dal.
Bishii hore ayey ahayd kolkii ay Ethiopia iyo Kenya ku heshiiyeen ilaalinta nabad galiyada xuduuda u dhaxaysa labada dal. Kenya waxay xidh xidhay boqolaal ka mid ah mucaaradaka Ethiopia ee ururka OLF, meesha ay diiday in ay qabato xubnaha mucaaradka ururka ONLF ee jooga Kenya, oo uu ka midka yahay madaxa maamulka Azania.
Khilaaf ka dhex dhaca labada dal ee Ethiopia iyo Kenya, wuxuu keeni karaa waji cusub oo siyaasadeed oo ku soo kordha Geeska Afrika, midkaas oo ay suurto gal tahay in ay timaado midow Somalida Geeska Afrika.
Rafiiq Xaaji Cumar